ग्यालेक्सी फोल्ड स्मार्ट फोन समिक्षा चरणमै भाच्चियाे, के भन्छ कम्पनी ? – Clickmandu
ग्यालेक्सी फोल्ड स्मार्ट फोन समिक्षा चरणमै भाच्चियाे, के भन्छ कम्पनी ?
क्लिकमान्डु २०७६ वैशाख ५ गते १२:१२ मा प्रकाशित
काठमाडौ । मोवाइल क्षेत्रमा निकै प्रभावसाली मानिने कम्पनी मध्येको एक हो सामसुङ । तर प्रभावसाली मानिएको उक्त कम्पनी अहिले भने तनाबमा फसेको छ ।
सामसुङले बनाएको सामसुङ ग्यालेक्सी फोल्ड मोवाइल एउटा नमुना कामको रुपमा हेरिएको थियो । योे एक पृथक मोवाइल हुने आँकलन समेत गरिएको थियो । तर सामसुङको यो मोवाइल समिक्षकहरुको हातमा पर्ने वित्तिकै भाच्चिएपछि यसको भविष्य अन्यौलमा परेको छ ।
सामसुङले यो मोडलको मोवाइलको समिक्षाका लागि विश्वभरका केहि समिक्षकहरुलाई उक्त मोवाइल प्रदान गरेको थियो । तर अधिकांश समिक्षकहरुले प्रयोग गर्न खोज्दा उक्त मोवाइल भाच्चिएपछि अहिले यो समाचारले विश्व मोवाइल जगतमा तरङग फैलिएको छ ।
अधिकांश रिपोर्ट अनुसार अमेरिकाका मिडियालाई दिइएका सबैजसो मोवाइल भाच्चिएका छन । तर कपिपयले भने समिक्षकहरुले स्क्रिन प्रोटेक्टर हटाएका कारण उक्त समस्या आएको बताएका छन ।
सामसुङले उक्त समस्याबारे आफुले जानकारी पाएको र समस्या पहिचान गरि समाधान गर्न कम्पनी लाग्ने जनाएको छ । कम्पनीले भनेको छ–केहि समिक्षकहरुले आफुले टप लेयर हटाएको र त्यसले स्क्रिनमा समस्या आएको बताएका छन जुन स्क्रिन स्क्रयाच नहोस भनेर राखिएको डिस्प्ले स्ट्रकचर डिजाइन हो । हामीले यो सूचनालाई सुनिश्चित गरी ग्राहकहरुलाई स्पष्ट पार्नेछौ ।
नोट १० प्लस र पी ३० प्रो: कुन स्मार्टफोन राम्रो ?
८० करोड नबुझाएपछि अजेय सुमार्गीको हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेज
सिसी क्यामराको सहयोगले ९ हजार चालक प्रहरी फन्दामा
एनसेल लाभकर विवादः फैसला एक साता सर्यो
स्मार्टसेलको लाइसेन्स खारेज हुनबाट बच्यो, बुझायो ३० करोड